🥇 ▷ Persona 5 Royal waxay sii wadaysaa inay sii kordhiso warar badan oo dheeraad ah laba fiidiyowyo cusub ✅
Persona 5 Royal waxay sii wadaysaa inay sii kordhiso warar badan oo dheeraad ah laba fiidiyowyo cusub
Atlus Waxaa loo isticmaalaa in lagu farxo cusbooneysiinta raaxada dhabta ah ee ciyaarahaaga. Qadarka ay ku daraan badanaa waa mid aad u weyn si ay u noqdaan jawaab celinno fudud, iyo Persona 5 Royal Kama yaraan doonto.
Maanta waxaan heysanaa labo fiidiyow oo cusub oo sharxaya qaar ka mid ah wararka aan arki doonno (iyada oo loo sii marayo Gematsu). Midkood wuxuu u heellan yahay Rabbiga Qolka musbaarka, halkaasoo ay ku darsadeen habka Loolanka adag oo leh dhibco, marka lagu daro farsamooyinka wajiga cusub sida “fooxa” kaasoo noo oggolaanaya inaanu kor ugu qaadno Qofka xorriyad dheeraad ah.
Markaa tan alaarmiga, taasi waa wax iska soo horjeedda. Haddii aan isku darno marka ay joogsato wicitaanka, Qofkayagu wuxuu ku fiicnaan doonaa dhinacyo badan, laakiin waxay noqon doonaan kuwo aan la saadaalin karin.
Fiidiyowga kale wuxuu diiradda saarayaa dhacdooyinka cusub nolosha bulshada ee jilayaasha, sida safarada iskuulka iyo kuwa kale. Laba meelood oo cusub ayaa lagu daray, iyo xirfadihii Qarsoodiyaasha Waxay hadda noqon doonaan kuwa ka awood badan. Xaqiiqdii, asxaabteena ayaa naga soo wici kara taleefanka si aan u sii joogno sidaas darteedna aan u xoojinno xiriirka.
Persona 5 Royal ka soo bixi doona Japan 31-ka Oktoobar ee sannadkan. Sida had iyo jeer, waxaan halkan ku arki doonaa dhowr bilood ka dib. Soo-saaristeeda galbeedka ayaa loo qorsheeyay gu’ga 2020.
Waxaan uga tagnay labada fiidiyow inaad u fiirsato, in kasta oo ay Jabuutiyaan yihiin.
La wadaag Persona 5 Royal sii wadida ku darista warar badan oo dheeri ah laba fiidiyowyo cusub